Liyini ilanga: izici, ukwakheka nomsebenzi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Inkanyezi eyakha isikhungo sonozungezilanga futhi esondele kakhulu emhlabeni yilanga. Ngenxa yelanga, iplanethi yethu inganikeza amandla ngendlela yokukhanya nokushisa. Yile nkanyezi ekhiqiza izimo zezulu ezahlukahlukene, imisinga yolwandle nezinkathi zonyaka. Ngamanye amagama, yingoba ilanga linikeza izimo eziyisisekelo ezidingekayo ukuze kube khona impilo. Izici zelanga zihlukile futhi ukusebenza kwalo kuthakazelisa kakhulu. Kukhona abanye abantu abangazi yini ilanga noma izici zayo, ukusebenza nokusebenza kwayo.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela ukuthi liyini ilanga, izici zalo nomsebenzi walo.
1 Liyini ilanga
3 Liyini ilanga: isakhiwo sangaphakathi
Into yokuqala yakho konke ukwazi ukuthi liyini ilanga nokuthi liyini imvelaphi yalo. Khumbula ukuthi kuyinto ebaluleke kakhulu yasezulwini ukusinda kwethu nokwabanye izidalwa eziphilayo. Kunezinto eziningi ezenziwe ilanga futhi kulinganiselwa ukuthi ziqale ukugcwala ngenxa yesenzo samandla adonsela phansi njengoba ikhula kakhulu. Ibhodi lamandla adonsela phansi yilona elenze ukuthi udaba luqoqeke kancane kancane futhi, ngenxa yalokho, izinga lokushisa nalo lenyuka.
Kwafika isikhathi lapho izinga lokushisa laliphezulu kakhulu kangangokuba lafinyelela cishe ezigidini ezingama-degree Celsius. Ngalesi sikhathi lapho izinga lokushisa kanye namandla adonsela phansi kanye nodaba oluhlanganisiwe kuqale kwakha ukusabela kwenuzi ngamandla amakhulu kangangokuthi yikhona okunikeze inkanyezi ezinzile esiyaziyo namuhla.
Ososayensi bathi isisekelo selanga yizo zonke izindlela zenuzi ezenzeka ku-reactor. Singabheka ilanga elijwayelekile njengenkanyezi ejwayelekile yize inesisindo, irediyasi, nezinye izinto ezingaphandle kwalokho okubhekwa njengesilinganiso sezinkanyezi. Kungashiwo ukuthi yizo zonke lezi zici ezenza kube ukuphela kohlelo lwamaplanethi nezinkanyezi ezingasekela impilo. Okwamanje asazi noma yiluphi uhlobo lwempilo ngale kwesimiso sonozungezilanga.
Abantu bebelokhu bethakazeliswa yiLanga. Yize bengakwazi ukulibuka ngqo, bakhe izindlela eziningi zokulitadisha. Ukubhekwa kwelanga kwenziwa kusetshenziswa izibonakude esezivele zikhona emhlabeni. Namuhla, ngokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe, kungenzeka ukuthi ufunde ilanga ngenxa yokusetshenziswa kweziphuphutheki zokwenziwa. Usebenzisa i-spectroscopy, ungazi ukwakheka kwelanga. Enye indlela yokufunda le nkanyezi ama-meteorites. Le yimithombo yolwazi ngoba igcina ukwakheka kwasekuqaleni kwefu le-protostar.
Lapho sesazi ukuthi liyini ilanga, ake sibone ukuthi yiziphi izici zalo eziyinhloko:
Isimo selanga cishe siyisiyingi. Ngokungafani nezinye izinkanyezi endaweni yonke, ilanga licishe libe yisiyingi ngokuphelele. Uma sibheka siseplanethi yethu, singabona idiski eliyindilinga ngokuphelele.
Iqukethe izinto ezahlukahlukene eziningi kakhulu njenge-hydrogen ne-helium.
Usayizi we-angular welanga ucishe ube uhhafu we-degree uma isilinganiso sithathwa kwiplanethi yoMhlaba.
Indawo ephelele icishe ibe ngamakhilomitha angama-700.000 futhi kulinganiselwe kusuka kusayizi wayo we-angular. Uma siqhathanisa ubukhulu bayo nobeplanethi yethu, siyabona ukuthi ubukhulu bayo buphinda cishe izikhathi eziyi-109. Noma kunjalo, ilanga libhekwa njengenkanyezi encane.
Ukuze ube neyunithi yokukala endaweni yonke, ibanga eliphakathi kwelanga noMhlaba lithathwe njengeyunithi yezinkanyezi.
Ubukhulu belanga bungalinganiswa ngokusheshisa ukuthi umhlaba uzuza uma usondela eduze kwakho.
Njengoba sonke sazi, le nkanyezi ibhekana nemisebenzi yezikhathi ezinodlame futhi ihlobene nemagnetism. Ngaleso sikhathi kuvela ama-sunspots, ama-flares kanye nokuqhuma kwendaba ye-coronal.
Ubuningi belanga buphansi kakhulu kunalokho koMhlaba. Lokhu kungenxa yokuthi inkanyezi iyinhlangano enegesi.
Esinye sezici ezidume kakhulu zelanga ukukhanya kwaso. Kuchazwa njengamandla angakhishwa ngeyunithi ngayinye yesikhathi. Amandla elanga alingana ngaphezu kweshumi aphakanyiswe kuma-kilowatts angama-23. Ngokuphikisana, amandla akhazimulayo ama-incandescent bulbs angaphansi kwama-kilowatts ayi-0,1.
Ukushisa kwelanga okuphumelelayo kwelanga cishe kungama-6.000 degrees. Lokhu izinga lokushisa elijwayelekile, yize ingaphakathi laso phezulu kuyizindawo ezifudumele.
Liyini ilanga: isakhiwo sangaphakathi
Lapho sesazi ukuthi liyini ilanga nokuthi yiziphi izici zalo eziyinhloko, sizobona ukuthi isakhiwo sangaphakathi siyini. Kubhekwa njengenkanyezi encane ephuzi. Ubuningi balezi zinkanyezi buphakathi kuka-0,8 no-1,2 ubude besisindo senkosi yelanga. Izinkanyezi zinezici ezithile ze-spectral ngokuya ngokukhanya kwazo, ubukhulu, kanye nezinga lokushisa.
Ukwenza lula ukutadisha nokuqonda izici zelanga, ukwakheka kwalo kuhlukaniswe izendlalelo eziyisithupha. Isatshalaliswa ezindaweni ezihluke kakhulu futhi iqala ngaphakathi. Sizohlukanisa futhi sikhombe izici eziyinhloko zezendlalelo ezahlukahlukene.
Umnyombo welanga: Usayizi wayo ucishe ube yi-1/5 ye-radius yelanga. Yilapho wonke amandla akhishwa yizinga eliphezulu lokushisa akhiqizwa khona. Izinga lokushisa lapha selifinyelele ezigidini eziyi-15 degrees Celsius. Futhi, ingcindezi ephezulu iyenza indawo elingana ne-reactor fusion reactor.
Indawo enemisebe: Amandla avela ku-nucleus asakazeka emshinini wemisebe. Kulo mkhakha, zonke izinto ezikhona zisesimweni se-plasma. Izinga lokushisa lapha aliphakeme njengengqikithi yomhlaba, kepha selifinyelele ku-5 million Kelvin. Amandla aguqulwa abe ama-photon, adluliswayo futhi abuyiselwe kabusha izikhathi eziningi izinhlayiya ezakha i-plasma.
Indawo eqondisayo: Le ndawo yingxenye ama-photon afinyelela kuyo endaweni enemisebe kanti izinga lokushisa lilinganiselwa ku-2 million Kelvin. Ukudluliswa kwamandla kwenzeka nge-convection, ngoba udaba lapha alunasici kangako. Ukudluliswa kwamandla okuqhutshwa kwe-Convection kwenzeka ngokuhamba kwama-vortices egesi emazingeni okushisa ahlukahlukene.
I-Photosphere: Kuyingxenye yobuso obubonakalayo benkanyezi futhi besihlala siyifuna. Ilanga aliqinile ngokuphelele, kodwa lenziwe nge-plasma. Ungayibona i-photosphere ngesibonakude, inqobo nje uma inesihlungi ngakho-ke ayithinti ukubona kwethu.
I-Chromosphere: Ingqimba engaphandle impela ye-photosphere, elingana nomoya wayo. Ukukhanya lapha kubomvu, ubukhulu buyahluka futhi ibanga lokushisa liphakathi kwama-degree ayi-5 kuya kwayi-15.000.
ICorona: Ungqimba olunesimo esingajwayelekile futhi ludlulela kuma-radii amaningi elanga. Kubonakala ngeso lenyama, izinga lokushisa layo cishe liyi-2 million Kelvin. Akucaci ukuthi kungani izinga lokushisa lale ungqimba liphakeme kangaka, kodwa zihlobene namandla kazibuthe aqinile akhiqizwa yilanga.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngokuthi liyini ilanga nokuthi linjani izici zalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Liyini ilanga